Sayniska Qoyska & Macaamilka - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Sayniska Qoyska iyo Macaamilka waa anshax tacliimeed isku dhafan astaamaha sayniska bulshada iyo dabiiciga, iyo sidoo kale farshaxanka. Qoyska iyo sayniska sayniska ayaa wax ka qabta xiriirka ka dhexeeya shakhsiyaadka, qoysaska, iyo bulshada. Fasalladayadu waxay matalaan farsamooyin fara badan oo ay ka mid yihiin sayniska macaamiisha, nafaqada, farshaxanka cunnada, waalidnimada, waxbarashada carruurnimada hore, dhaqaalaha qoyska iyo maaraynta kheyraadka, horumarka aadanaha, madaxbannaanida dhaqaale, naqshada gudaha, dharka, naqshada dharka, iyo tolidda iyo sidoo kale maadooyinka kale ee la xiriira. Fasallada waxaa loo baraa sidii xulashooyinka, qaarna waxaa loo tirin karaa sidii buundo farshaxan oo looga baahan yahay qalin-jabinta. Koorsooyinkeennu waxay ka caawiyaan ardayda wareejinta akhriska, qorista iyo xisaabta nolosha dhabta ah. Hadafkeenu waa inaan u diyaarino ardayda nolosha qoyska, nolosha kuleejka iyo nolosha shaqada anagoo baraneyna inay aqoonsadaan una abuuraan xalal kale oo ku wajahan caqabadaha maalinlaha ah iyo inaan qaadno masuuliyada ficilladooda bulshada kala duwan ee adduunka.
Dariiqyada Sayniska Qoyska iyo Macaamilka
Koorsooyinka Sayniska Qoyska & Macaamiisha (PDF)
Dhismaha Dharka I
Shahaadooyinka (yada) la bixiyo: 9-12
Tani waa fasal ku habboon gacmaha-wax-bartayaasha oo leh hammi ay ku soo saaraan hal-abuurradooda. Waxaad ka buuxsami doontaa sharaf markii aad ku guuleysato guusha mashiinka harqaanka oo aad la kulanto barasho la taaban karo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dhismaha Dharka I
Koorso : # 6314
Fasalada (yada) la bixiyo : 10-12
Baro habka horumarka bani'aadamka laga soo bilaabo rimidda illaa da'da shanta sida lagu go'aamiyey dhaxalka, bulshada iyo isdhexgalka aadanaha ee saameynta ku leh hagida carruurta.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Kobcinta Caruurta
Haddii aad tahay kuugga hamiga leh ama bilowga ah ee jikada, koorsadani waxay ku siin doontaa kalsooni inaad ku guuleysato adduunka cunnada. Waa fasalka koowaad ee dugsiga sare ee Minnetonka!
Akhri Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Cunnurka I
Culinary II: Cuntooyinka Caalamiga ah
Shuruudaha: Cunnada 1
Ka baari cunnada adduunka oo idil. Abuur cuntooyin adoo adeegsanaya mabaadi'da iyo farsamooyinka karinta ee horumarsan. Waxaad la kulmi doontaa heer cusub oo hal-abuurnimo iyo guul inta aad ka baraneyso dhaqamada kala duwan iyo dhaqankooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Culinary II: Cuntooyinka Caalamiga ah
Fiiro gaar ah: Koorsadani waxay dhammaystireysaa .5 dhanka amaahda Farshaxanka
Koorsadani waxay kordhin doontaa wacyiga ardayda iyo fahamka fursadaha xirfadeed ee la xiriira warshadaha moodada. Waxaad abuuri doontaa simistarka oo dhan! Ikhtiyaarka 15-aad ee sanadlaha NYC Fashion waa Nofeembar 2019.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Naqshadeynta Dharka
Ardaydu waxay heli doonaan fahamka cunsurrada iyo mabaadi'da naqshadeynta. Koorsadu waxay ka koobnaan doontaa qorsheynta dhulka, qaababka guryaha iyo qalabka guryaha, isticmaalka midabka, dharka iyo waxyaabo kale oo badan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Naqshadeynta Gudaha
Ma xiiseyneysaa inaad carruurta kala shaqeyso xirfad ahaan? Waxaan diirada saari doonaa heerarka koritaanka, istaraatiijiyadaha waxbarista iyo mowduucyo kala duwan oo laxiriira waddooyinka xirfadaha ee udub dhexaadka u ah carruurta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hordhaca waxbarashada
Quful & Naqshadaynta Naqshadeynta
Koorso: # 6308
Baro inaad tosho oo aad sameysid dharkaaga hore. Tani waa fursad lagu abuuri karo waxna lagu baran karo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Goynta & Naqshadaynta Naqshadeynta
Dharka u xidho "Saxaafadda"
Fasalka naqshadeynta moodada ee Dugsiga Sare ee Minnetonka ayaa u keenay moodooyinkooda dharka nolosha iyagoo abuuraya dharka wargeysyada. Koorsada nashqadeynta dharka ayaa la soo saaray 13 sano ka hor waana mid ka mid ah koorsooyinka moodada yar ee laga heli karo dugsiyada dadweynaha ee gobolka Minnesota.